गण्डकी भलिबलका सान हरि : कोर्ट भित्र हर्ष, बाहिर संघर्ष | Hamro Khelkud
‘हरि! हरि! हरि! हरि!’
पोखरा रंगशालास्थित भलिबल कोर्टमा गण्डकी प्रदेशले टाइगर कपको उपाधि जित्दा हजारौं दर्शकहरुको मुखारविन्दमा एकै नाम थियो, हरि पाण्डेयको । घरेलु समर्थकको बीचमा गण्डकी प्रदेशले विभागीय त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई स्तब्ध पार्दा टोलीका कप्तान हरिको देब्रे हाते स्पाइक निर्णायक पनि सावित भयो ।
यसै पनि दर्शकमाझ चर्चामा रहिरहने हरिको उक्त प्रदर्शनले उनको लोकप्रियता अझै बढेको छ । तर मैदानभित्रको खेलले जति चर्चामा उनी रहँदै आएका छन्, उनको मैदानबाहिरको संघर्षबारे भने कमैले भेउ पाएका छन् ।
यसैपनि देब्रे हाते खेलाडी कम पाइने नेपाली भलिबलमा हरिले स्थानीय प्रतियोगितामा आफ्नो बेग्लै पहिचान स्थापित गरेका छन् । कुशल प्रतिभा र अनुशासित खेलाडी हरि अझैपनि किन प्रदेश टोलीमै सिमित छन् भन्ने जिज्ञासा पनि धेरैमा छ । तर भाग्यले साथ नदिँदा विभागमा पुगेर पनि उनी त्यहाँ आफ्नो करिअर अघि बढाउन असमर्थ भए ।
दुई साता अघि पोखरामा सम्पन्न प्रथम टाइगर कप आमन्त्रण खुल्ला भलिबल च्याम्पियनसिपमा हरिकै कप्तानीमा रहेको घरेलु टोली गण्डकी प्रदेश च्याम्पियन बन्यो । फाइनलमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई स्तब्ध पार्दै उपाधि जितेको थियो । गण्डकीले भलिबल इतिहासमा पहिलो उपाधि जित्ने क्रममा आर्मीलाई त्यसै प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो पटक पराजित गर्यो ।
समूह चरणमा ३-१ को जित दर्ता गर्दा पहिलो पटक आर्मीमाथि जित हासिल गरेको गण्डकीले निकै प्रतिस्पर्धात्मक फाइनलमा आर्मीलाई पाँचौ सेटमा पाखा लगाउँदै उपाधि जितेको थियो । राष्ट्रिय खेलाडीको बाहुल्यतासँगै वर्षभरी अभ्यास गर्ने आर्मीविरुद्ध एक हप्ताको तयारीमा कोर्टमा उत्रेको गण्डकीले लिग र फाइनल दुवैमा हराउनु सानो उपलब्धि थिएन ।
कप्तान हरिसँगै गण्डकीका सबै खेलाडीको प्रर्दशन, भूमिका र योगदान उत्कृष्ट थियो । हरिले आफूहरुले पर्याप्त अभ्यास गर्न नपाएपनि टोलीको सन्तुलन, घरेलु समर्थक र कोर्टको फाइदा उठाउँदै आफ्नो टोली सफल रहेको बताए । राम्रो अभ्यास पाउने हो भने गण्डकीले यो भन्दा धेरै राम्रो गर्न सक्ने उनको विश्वास छ ।
हरि पछिल्लो ६ वर्षदेखि नेपाली भलिबलमा प्रत्यक्ष लागेका छन् । ‘यसक्रममा एउटा न एउटा विभागीय टोलीलाई हराएका थियौं । सेट मिल्दै गएको थियो । स्थानिय खेलमा पनि हाम्रो टोलीनै हुन्थ्यो’, हरिले भने,‘ यस पटक टोली समन्वय राम्रो भयो । लकडाउनपछि तीन चारवटा प्रतियोगिता सँगै खेलेका थियौं, जसले गर्दा उपाधि जित्न सहज भयो ।’
गण्डकी एक साता भन्दा कम तयारीमा टाइगर कपमा उत्रेको थियो । हरि चितवनमा हुँदा गण्डकी कपको छनोट हुने फेसबुकबाट थाहा पाए । त्यो जानकारी पाउनुअघि हरि भलिबल खेल्न दाङमा जाने पक्का गरिसकेका थिए । तर टाइगर कपको अवसरलाई उनले छाड्न चाहेनन् । हरि आफूले खेलिरहेको टोलीको दाङ यात्रा रद्द गरेर पोखरा छनोट खेल्न पुगे ।
छनोटमा गण्डकीमा उपलब्ध सबै खेलाडी पनि आएनन् । छनोटपछि अभ्यास पाँच दिन मात्र भएको थियो । छोटो तयारीमा धेरै गर्न नसकिने हरि बताउँछन् । ‘तयारी कम भएपनि टोलीको लक्ष्य भने उपाधि जित्ने थियो । आफ्नो घरेलु मैदान र समर्थकको साथले पनि उपाधिमा सहयोग पुग्यो’,उनले उपाधि क्षणबारे बताए, ‘खेलकै दौरान गण्डकीको टोलीको लय मिल्दै गयो । टोलीका सबै खेलाडीले स्तरीय प्रदर्शन गरे ।’
हरिको जन्म स्याङ्जाको कालिगण्डकी गाउँपालिका–१ मा बुबा ईश्वरी प्रसाद र आमा युवा कुमारी पाण्डेयको कान्छो सन्तानको रुपमा २०५० साल भदौ १४ गते मा भएको थियो । उनको कागजी नाम भने खोम प्रसाद पाण्डेय हो । खेलमा हरि नामले चिनिन चाहने उनको तीन दिदी र दुई दाई छन् । उनले सानो उमेरदेखि नै भलिबल खेले । भलिबल मोहकै कारण स्कुलबाट फर्केपछि घरमा आफ्नो जिम्मामा पर्ने काम जतिसक्यो छिटो सकेर भलिबल खेल्न जान्थें । झुम्राको बलबाटै उनले भलिबल सिक्दै र खेल्दै हुर्किए ।
हरिले कक्षा ८ सम्म स्थानीय शिव निम्न माध्यामिक विद्यालय खोर्दीमा पढें । त्यसपछि उनी २०६७ मा गाउँ छोडेर अध्ययनको लागि बुटवल झरे । बुटवलमा कालिकाबाट अध्ययन अघि बढाए । त्यसक्रममा उनले सुख्खानगरमा रहेको लाफा क्लबमा आवद्ध हुँदै भलिबल क्षमतालाई अझ सुधार गर्नतर्फ लागे । सोहि क्लबबाट सानोतिनो प्रतियोगिता पनि खेले ।
दाईहरुको सुझावपछि हरि २०६९/७० तिर भलिबलमा अझ राम्रो गर्न नेपाल पुलिस क्लबमा ट्रेनिङ गर्न काठमाडौं आए । गोगंबु बसपार्कको होटलमा एउटा कोठा लिएर भलिबल प्रशिक्षण गर्न थाले । विना कुनै सुविधा उनले पुलिसमा नियमित अभ्यास गरे । भलिबल प्रतिको लगावले होला केहि नपाए पनि उनले अभ्यास गर्न भने छाडेनन् ।
पोखरामा २०७१ को फागुनमा भएको राष्ट्रिय प्रतियोगितामा हरिले पुलिसबाट खेले । पुलिसको टोली र राष्ट्रिय प्रतियोगिता दुवैमा उनको यो पहिलो अनुभव थियो । विना कुनै सुविधा खेल्नेमात्र भएपछि आफ्नो खर्च धान्न नै मुस्किल भयो । त्यसपछि उनी करारमा त्रिभुवन आर्मी क्लब लागे । आर्मीमा खाना बस्नसँगै जागिरको अवसर पाउने आशाले उनी २०७२ को अन्तिममा त्यहाँ आबद्ध भएका थिए । तर दुर्भाग्य आर्मीमा गएको केहि समयमा नै उनका बुबा बिरामी परे ।
गाउँ पुगेर उपचारका लागि बुवालाई काठमाडौं ल्याए । बुबासँग अस्पतालमा रहँदा आर्मीमा जागिरमा भर्ती हुन पटक पटक फोन आइरह्यो । हरि दोधारमा परे । उनीसँग दुई वटा विकल्प थियो । एउटा बुवालाई अस्पतालमा कुरेर बस्ने की सेनामा भर्ती हुन जाने ।
बुबालाई त्यो अवस्थामा छाडेर जागिर खान जाने निर्णय गर्न उनको मनले मान्ने कुरै भएन । त्यसैले सेनामा भर्ति हुने सपना थाँती राखेर बुबाकै स्याहारमा जुटिरहे । मस्तिष्कमा ट्युमरको बिरामी बुबासँगै उनी अस्पतालमा ६ महिना बसे । तर अस्पताल छाडेको केहि महिनामा बुवाले संसार छाडे ।
पितालाई गुमाउनुको पीडामा रहेपनि हरि त्यसको एक महिनापछि भलिबल कोर्टमा फर्किए । उक्त पिडा बिर्साउन भएपनि फेरी भलिबलमा लाग्ने उनले सोचेका थिए । लामो विश्रामका कारण उनको लय खस्किसकेको थियो । तर नियमित अभ्यास र स्थानीय प्रतियोगिता खेल्दै जाँदा उनलाई पुरानो स्तरमा फर्कन समय लागेन ।
२०७५ सालमा नेपालगञ्जमा भएको आठौं राष्ट्रिय प्रतियोगितामा हरिले पहिलो पटक प्रदेशको कप्तानी गरे । दोस्रो प्रधानसेनापति भलिबल प्रतियोगितामा गण्डकीले पहिलो पटक विभागीय टोली एपिएफलाई हराउँदै तेस्रो हुन सफल भयो । तेस्रो प्रधानसेनापति भलिबलमा गण्डकीको कप्तानी हरिले गरे । तेस्रो र चौथो प्रधानसेनापतिमा गण्डकी दोस्रो भएको थियो ।
लामो प्रयासपछि हरिको कप्तानीमा गण्डकी पहिलो उपाधि जित्न सफल रहयो । टाइगर कपमा गण्डकीको खेल हुँदा दर्शकको बाक्लो उपस्थिति रहन्थ्यो । यसै पनि खँदिलो ज्यान भएका हरि बायाँ हाते स्पाइक गर्ने भएर होला अरु भन्दा केहि भिन्न देखिन्छन् ।
दर्शकको नजरमा पनि हरि टाइगर कप भर केन्द्रमा रहे । हरिको स्पाइक बाहिर जाँदा दर्शक निराश हुन्थे । ए हरि निस्की भन्थे । अर्कोतिर स्पाइक विपक्षी कोर्टमा खस्दा दर्शकको अझ बढी पाउँथे । दर्शकमाझ खेल्दा उर्जा थपिने र प्रदर्शन गर्न मनोबल बढ्ने उनको बुझाइ छ ।
प्रतियोगिताभर हरिले दर्शकको आलोचना र साथ दुवै अलि अलि सुनिए भने त्यता धेरै ध्यान नजाने सुनाए । उनले भने ‘फिल्डमा हुँदा दर्शकको प्रतिक्रियामा धेरै ध्यान जादैन । खेलमै बढी ध्यान हुन्छ । दर्शकको उपस्थितिले भने खेलको माहोल नै फरक हुन्छ ।’
हरि राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षणका लागि बोलाइएपनि अन्तिम टोलीमा भने पर्न सकेका छैनन् । सन् २०१८ मा बंगलादेशमा भएको एभिसी सेन्टर जोन च्याम्पियनसिपका लागि उनी बन्द प्रशिक्षणमा परेका थिए । तर अन्तिम १६ बाट बाहिरिए । त्यसपछि भने फेरि बन्द प्रशिक्षणमा पर्न सकेका छैनन् । उनको एउटा सपना छ कम्तिमा देशका लागि एउटा खेल भएपनि खेल्ने ।
भलिबलको यो यात्रामा हरि दाई वरुणबाबु घिमिरेको साथ र सहयोग महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउँछन् । वरुणले ४ वर्षसम्म चितवनमा राखेर भलिबल खेल्ने वातावरण मिलाएकै कारण यहाँसम्मको यात्रा तय गर्न सकेको उनी बताउछन् ।
देशका लागि खेल्नेसँगै भारतीय वा ब्रिटिस आर्मीमा भर्ना हुने उनको अर्को धोको थियो । लाहुरे बन्ने सपना पूरा गर्न पोखराबसेर ट्रेनिङ पनि गरे । तर त्यहाँ सफलता मिलेन । लगातर अन्तिम समयमा गएर फालिन्थे । उनले त्यो इच्छा पूरा भएन । लाहुरे बन्न नसकेपनि त्यसको ट्रेनिङले भलिबलमा साथ दिएको उनलाई महसुस हुन्छ ।
अहिले हरिसँग भलिबल बाहेक करिअरको विकल्प छैन । जति सकिन्छ त्यहाँसम्म खेल्ने अनि भलिबलबाट बिदा हुने उनको सोच छ । ‘राम्रो हुँदै गयो भने प्रदेशबाटै खेल्छु । भएन भने अन्तमा पलायन हुने बाहेक के छ ?,’ निराश हुँदै उनले सुनाए,‘ अहिले खेलेर मात्र पनि भएन । पछिको लागि हेर्नु पर्यो । खेल्दा जित्दा र हार्दा हाई हाई गरेर मात्र भएन । सधैं यसरीनै भलिबल खेलेर मात्र पनि हुँदैन । भविष्य पनि हेर्नुपर्यो ।’
भलिबल नेपालको राष्ट्रिय खेल हो । भलिबलको साच्चै विकास गर्ने हो भने विभागिय टोलीलाई जत्तिकै प्रदेशका टोलीलाई पनि बलियो बनाउन आवश्यक रहेको हरिको बुझाई छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकार र भलिबल संघले विशेष योजना सहित खेलाडीलाई राम्रो सेवा सुविधा दिने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् ।
भलिबलमा गण्डकीले प्रदेश टोली पनि कमजोर छैनन् भन्ने एउटा राम्रो उदाहरण र सन्देश दिएको छ । तर अब त्यहि प्रदर्शनको निरन्तरता दिनु प्रदेश सामू उस्तै चुनौती पनि छ । त्यो चुनौतीलाई सामाना गर्न तयार नहुने हो भने गण्डकीले आर्मीलाई फाइनलमा हराएको इतिहास त्यहीं मात्र सिमित हुनेछ । हरि जस्ता प्रतिभालाई अहिले नै खेलमा लागिरहने आधार खडा नगर्ने हो भने नेपाली भलिबलले उनी मात्र होइन, आउने दिनमा यस्ता धेरै प्रतिभा गुमाउने डर हुन्छ ।